”Qofka laguma oran karo maxaad carruur badan u dhashay!” – Social-ka oo ka jawaabey cabasho ka timid Soomaalida Göteborg (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Qofka laguma oran karo maxaad carruur badan u dhashay!” – Social-ka oo...
”Qofka laguma oran karo maxaad carruur badan u dhashay!” – Social-ka oo ka jawaabey cabasho ka timid Soomaalida Göteborg (Dhegeyso)
(Gothenburg) 23 Okt 2020 – Waxaa todobaadkii tegey magaalada Göteborg ka dhacay kulan dhex marey dallada Västra Götalands Distrrikt Förbundet iyo madax ka socotey qaybta bari ee maamulka degmada Göteborg, kuwaasoo ashtako ka ahaa howl wadeenno xafiiska dhaqaalaha laga dalbado oo ay sheegeen inay bahdilaan oo xujeeyaan.
Dalladda & Bjarne Öhman, Madax Qaybeedka Maamulka göteborg ee dhaqaale bixin ama cayrta ee bariga Göteborg.
Previous articleHaweenay Soomaali ah & qoyskeeda oo amar lagu siiyey inay dhaqse uga baxaan dalka Norway + Sababta
Next article‘’Qiimayn ma arag’’ – Calool-xumadii ay la god gashay hoboladdeennii BAXSAN